Fire ọgụ robot Factory - China Fire ọgụ robot Manufacturers, Suppliers
RXR-YC25000BD Bọmbụ gbawara agbawa na-àmà firefighting anwụrụ ọkụ na scouting robot
Nchịkọta ngwaahịa Dịka ụdị robot pụrụ iche, RXR-YC25000BD gbawara mgbapụta na-enwupụta ọkụ anwụrụ ọkụ robot nakweere lithium batrị ike ọkọnọ dị ka ike ọkọnọ, nke mejupụtara nke robot ahụ, anwụrụ ọkụ igwe, igwefoto infrared na njikwa njikwa aka. Ọkụ a na-alụ ọgụ robot na-achịkwa remotely site na ikuku ntanetị. Ọ nwere ike igwu ọrụ anwụrụ ọkụ na uzuzu, radieshon ọkụ, ịsa anwụrụ ọkụ na ikuku na-ekpocha ọkụ na ọgụ ọkụ na nnapụta, nke dị oke mkpa im ...
RXR-Q100D ọkụ nwere ọgụgụ isi mmiri alụlụ ọkụ na-agbanyụ robot
Na nchikota nke sistemụ Dị ka ụdị nke pụrụ iche robot, RXR-Q100D nwere ọgụgụ isi mmiri alụlụ ọkụ extinguishing robot adopts lithium batrị isi iyi dị ka robot ike isi iyi, mmanụ ụgbọala engine dị ka mgbapụta ike isi iyi, na n'ime ime obodo akara ọkụ na-emenyụ robot site wireless remote control. Na-ebugharị egbe mgbali mmiri dị elu, mgbali elu mmiri na-arụ ọrụ nke ikuku dị jụụ, ọgwụ ikuku, mmetụta emulsification na dilution nke ọkụ ọkụ, yana igbochi ọkụ ọkụ na ịsa anwụrụ ọkụ ...
RXR-MY120BD mgbanyụ ọkụ na anwụrụ anwụrụ ọkụ
Nkọwa ngwaahịa RXR-MY120BD mgbanyụ ọkụ na anwụrụ anwụrụ ọkụ bụ ụdị robot pụrụ iche. Ọ na-eji batrị lithium dị ka isi iyi ike ma na-eji eriri ikuku na-ejikwa eriri na-achịkwa ọkụ ọkụ na-a smokeụ sịga. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ petrochemical buru ibu. Tunnels na ụzọ ụgbọ oloko na-aba ụba. Mmanụ na gas, gas na-egbu egbu na mgbawa, tunnels, ụzọ ụgbọ oloko na ọdachi ndị ọzọ na-adakwasị ọdachi. Fire na-anyụ ma na-anwụ anwụ ...
RXR-MC200BD Bọmbụ gbawara agbawa na-egosi Fire Na-alụ ọgụ Reconnaissance Robot
Nkọwa ngwaahịa RXR-MC200BD mgbawa na-egosi ọkụ na-agbanyụ robot ọhụụ bụ ụdị robot pụrụ iche. Ọ na-eji batrị lithium dị ka isi iyi ike ma na-eji eriri ikuku na-achịkwa iji chịkwaa robot na-emenyụ ọkụ. Ihe bu igwe mejuputara na robot ahu, ogbugbu mmiri buru ibu, ihe ngbaputa nke ihe nkpuchi infrared dual-vision pan na ntanye, ihe nlere na ntaneti vidio, nyocha nke gas na ihe ojoo na ihe ndi ozo. Ọ bụ applicabl ...
RXR-MC120BD Bọmbụ gbawara agbawa na-egosi Fire Na-alụ ọgụ Reconnaissance Robot
Nkọwa ngwaahịa RXR-MC120BD ọkụ na-alụso robot ọgụ bụ ụdị robot pụrụ iche. Ọ na-eji lithium batrị dị ka isi iyi nke ike ma na-eji wireless remote control ka remotely ịchịkwa ọkụ extinguishing na anwụrụ ọkụ iyuzucha robot. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ petrochemical buru ibu. Tunnels na ụzọ ụgbọ oloko na-aba ụba. Mmanụ na gas, gas na-egbu egbu na mgbawa, tunnels, ụzọ ụgbọ oloko na ọdachi ndị ọzọ na-adakwasị ọdachi. Ọkụ na-anyụ anwụrụ ọkụ ...
RXR-MC80BGD Bọmbụ gbawara agbawa na-agba ọkụ na ịchụpụ robot
Okwu Mmalite RXR-MC80BGD mgbawa na-egosi ọkụ na-agbanyụ robot nyocha bụ ụdị robot pụrụ iche. Ọ na-eji batrị lithium dị ka isi iyi ike ma na-eji eriri ikuku na-achịkwa iji chịkwaa robot na-emenyụ ọkụ. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ petrochemical buru ibu, tunnels, ụzọ ụgbọ ala, wdg, ebe mmanụ na gas na-aba ụba, nsị gas na-egbu egbu na mgbawa, tunnels, ụzọ ụgbọ oloko na ọdachi ndị ọzọ. Ngwaọrụ pụrụ iche maka nnapụta na s ...
2-S RXR-MC80BD Bọmbụ gbawara agbawa na-agba ọkụ na ịchụ nta robot
Isi RXR-MC80BD Bọmbụ na-agbapụta ọkụ na-agba ọkụ na scoot robot na-echekwa ma kwado ya maka ịgbanyụ ọkụ na nyocha na gburugburu ebe mgbawa, dịka ịmegharị mmanụ, mmanụ na nchekwa mmanụ, yana nrụpụta kemịkalụ ndị ọzọ, ebe nchekwa, ebe njem, wdg. nyere aka melite nchekwa nnapụta ma belata mbibi na ozi. Atụmatụ 1. ★ Bọmbụ gbawara agbawa na-àmà gbaara; IP67 & IP68 2. ★ Sochie tinye okpomọkụ na-anabata ihe, ọkụ na-ekpuchi ọkụ na linin ọla ...
RXR-MC40BD Bọmbụ gbawara agbawa na-egosi ọkụfighting Ọkara mgbasa ụfụfụ na ịchọpụta robot 80D-3
Nyocha ngwaahịa RXR-MC40BD mgbawa na-agba ọkụ na-agbanyụ robot nyocha bụ ụdị robot pụrụ iche. Ọ na-eji batrị lithium dị ka isi iyi ike ma na-eji eriri ikuku na-achịkwa iji chịkwaa robot na-emenyụ ọkụ. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ petrochemical buru ibu, tunnels, ụzọ ụgbọ ala, wdg, ebe mmanụ na gas na-aba ụba, nsị gas na-egbu egbu na mgbawa, tunnels, ụzọ ụgbọ oloko na ọdachi ndị ọzọ. Ngwaọrụ pụrụ iche maka nnapụta na ebe ...
RXR-MC4BD Bọmbụ gbawara agbawa àmà ọkụ ọgụ elu multiplex ụfụfụ ọkụ nchọpụta robot
Nkọwa ngwaahịa RXR-MC4BD gbawara mgbawa na-egosi ọkụ ọkụ na-agbasa ụfụfụ ọkụ ọkụ na-agbanyụ ngwa ngwa robot bụ ụdị robot pụrụ iche. Ọ na-eji batrị lithium dị ka isi iyi ike ma na-eji akara ntanetị na-enweghị eriri iji chịkwaa robot ọgụ ọkụ. Enwere ike itinye ngwaahịa a na kemịkal dị egwu dị iche iche, ụlọ ahịa azụmaahịa buru ibu, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ azụmahịa, mines, tunnels, ụzọ ụgbọ oloko, ụlọ nkwakọba ihe, hanga, ụgbọ mmiri na nnapụta ihe ọghọm ndị ọzọ. Pr ...
RXR-M80D Fire ọgụ robot
PRODUCT INTRODUCTION Dị ka ụdị robot pụrụ iche, RXR-M80D na-emenyụ robot na-eji batrị lithium dị ka ike ọkọnọ ma jiri akara ikuku na-achịkwa iji chịkwaa robot na-emenyụ robot. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ, robot na-agbanyụ ọkụ na-arụ ọrụ dị oke mkpa na nnapụta na nnapụta, ọkachasị iji dochie ndị na-ere ọkụ na ọkụ dị egwu ma ọ bụ anwụrụ ọkụ ọkụ na-anapụta ọrụ pụrụ iche. Nso nke ngwa Nnukwu ụlọ ọrụ petrochemical, ọwara na ụzọ ụgbọ oloko ọkụ nnapụta na t ...
RXR-M 30D ọkụ na-alụ ọgụ ọkụ akọrọ na-emenyụ robot
Nchịkọta ngwaahịa RXR-M 30D ọkụ na-alụ ọgụ ọkụ ọkụ na-ekpochapu robot dị ka ihe ọkụ ọkụ na-emenyụ robot dị ka jet akọrọ ntụ ma ọ bụ ntụ ntụ ciment, na-eji lithium ike batrị dị ka ọkọnọ ike, na-eji eriri ikuku iji chịkwaa robot ihe robot si ogologo ebe dị anya. Nwee ike ijikọ ya na ụgbọala ntụ ntụ na ịgba ntụ iji gbanyụọ ọkụ. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ n'ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ petrochemical, tunnels, ụzọ ụgbọ oloko na ikuku ndị ọzọ na-aba ụba, gas mmanụ, ikuku mmiri a ...
RXR-C12BD mgbawa na-agba ọkụ na-agba ọkụ robot
Nkọwa ngwaahịa RXR-C12BD gbawara mgbawa ọkụ na-enwupụta robot bụ ụdị robot pụrụ iche. Ọ na-eji batrị lithium dị ka isi iyi ike ma na-eji eriri ikuku na-achịkwa iji chịkwaa robot ọkụ nyocha. Enwere ike iji ya na nnukwu ụlọ ọrụ petrochemical buru ibu, tunnels, ụzọ ụgbọ ala, wdg, ebe ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke mmanụ, gas, gas na-egbu egbu na mgbawa, tunnels, ụzọ ụgbọ oloko na ọdachi ndị ọzọ nwere nsogbu. Ọkụ na-agbanyụ robot p ...